मेयरले पेलेकाे भन्दै चाँगुनारायण नगर अस्पतालका सबै डक्टरले दिए राजिनामा : RajdhaniDaily.com
सञ्जीब दुलाल - February 9, 2021 0
सञ्जीब दुलाल - February 8, 2021 0
सञ्जीब दुलाल - January 28, 2021 0
सञ्जीब दुलाल - January 26, 2021 0
Home Breaking News मेयरले पेलेकाे भन्दै चाँगुनारायण नगर अस्पतालका सबै डक्टरले दिए राजिनामा
भक्तपुर । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सँगै जनजिवन आक्रान्त हुँदा चाँगुनारायण अस्पतालका सम्पूर्ण डक्टरहरुले राजिनामा दिएका छन् ।
चाँगुनारायण नगरपालिकाले संचालन गर्दैै आएको नगर अस्पतालका तीनै जना डक्टरले राजिनामा दिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अग्नी प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
अस्पताल प्रशासने नगर अस्पताल संचालनका लागि रञ्जीत कुमार दास , सुलभ केसी र जिवेश बास्तोलालाई करारमा नियुक्ती दिएको थियो ।
नगर अस्पताललाई कोविड अस्पतालमा परिवर्तन गरेपछि डक्टरहरुले डराएर राजिनामा दिएको अधिकारीको भनाई छ । अस्पताल प्रशासनले नेपाल सरकारले तोकेको सेवा सुविधा नगरपालिकाले दिन्छु भनेको तर, डक्टरहरूले थाप सेवा सुविधा माग गर्दै आएका थिए । त्यसैमा सहमती हुन् नसक्दा राजिनामा दिएका हुन् । राजिनामा दिएका मेसु डा रञ्जीत कुमार दासले आफ्नो आत्मसम्मान नहुँदा राजिनामा दिन बाध्य भएको बताए ।
‘हामी करारका डक्टर भएका कारण नगरपालिकादेखि मेयर सम्म सबैले पेल्ने गरेका छन् काम गर्ने वातावरण नै छैन ।’ मेसु दासले भने । काम गर्ने वातावरणा नभएकाले तीनै जनाले राजिनामा दिएको उनकाे भनाइ थियाे । आफूहरुले कोरोनाको कारण राजिनामा दिएको भन्दै हामी केहि दिनमा नै अर्को कोविड अस्पतालमा काम गर्ने बताए ।
ट्यांकर चालकलाई आजबाट कोरोनाविरुद्धको खोप
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्तिएका ट्यांकर चालक र सहचालकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप लगाउन पाउने भएका छन् । उनीहरूको...
गृहमन्त्री थापाकाे सांसद पद खारेज
Breaking News राजधानी समाचारदाता - April 18, 2021 0
काठमाडाैं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा राष्ट्रियसभा सदस्यबाट मुक्त भएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को तर्फबाट विसं २०७४ को राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा वाग्मती...
श्रीराम सुगर मिलले ति-यो किसानलाई २५ करोड रुपैयाँ
अर्थ सञ्जीब दुलाल - December 21, 2020 0
काठमाडौं । उखु किसानको आन्दोलनपछि लामो समयदेखि बक्यौता नतिरेर बसेका चिनी मिलले भुक्तानी दिन सुरु गरेका छन् । उखु किसान पटकपटक आन्दोलनमा उत्रिएपछि अहिले...
Breaking News सञ्जीब दुलाल - April 5, 2020 0
जनकपुरधाम । रौतहटको चोचा वन क्षेत्रमा वन रक्षक र तस्कर बीच दोहोरो गोली हानाहान भएको छ । लकडाउनका बेला तस्करी बढेको खबर आएपछि...
Breaking News सञ्जीब दुलाल - January 3, 2021 0
प्रदेश ३ सञ्जीब दुलाल - March 18, 2020 0
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९) को सम्भावित जोखिम कम गर्न काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राखेको छ । स्वास्थ्य...
सूचना प्रविधि सञ्जीब दुलाल - December 4, 2020 0
वडा नम्बर २ लाई गजराज जोशी कपको उपाधि
खेल सञ्जीब दुलाल - January 30, 2021 0
काठमाडौं । वडा नम्बर २ ले टोखा नगरपालिका अन्तरवडास्तरीय गजराज जोशी स्मृति कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । टोखास्थित भुतखेल मैदानमा शुक्रबार भएको...
प्रदेश ७ सञ्जीब दुलाल - July 28, 2020 0
महोत्तरीमा थप दुई जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु
प्रदेश २ सञ्जीब दुलाल - August 29, 2020 0
जलेश्वर । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट आज महोत्तरीमा थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा भङ्गाहा नगरपालिका–१ का ३० वर्षीय युवक र पिपरा...
सम्बन्ध विच्छेद गराउन अदालत धाउने पुरुष बढे
प्रदेश सञ्जीब दुलाल - March 11, 2020 0
दार्चुला । मुलुकी देवानी संहिता लागू भएपछि दार्चुलामा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने पुरुष बढेका छन् । २०७५ भदौ १ गतेदेखि ऐन लागू भएको हो ।...
सञ्जीब दुलाल - June 17, 2021
सञ्जीब दुलाल - June 20, 2021
सञ्जीब दुलाल - March 5, 2020